के तपाईंसँग यी जुलाई संगीत उत्सवहरूको लागि टिकटहरू छन्? | बेजिया
मारिया vazquez | 08/05/2022 22:00 | समाचार
गर्मीको समयमा प्रत्यक्ष संगीतको आनन्द लिने सम्भावनाहरू गुणा बढ्छन्। हाम्रो भूगोल भरि, द संगीत चाडपर्व एक अर्कालाई पछ्याउनुहोस् हामीलाई केही दिनमा कन्सर्टहरू हेर्न अनुमति दिनुहोस् कलाकारहरूको प्रभावशाली संख्या। जुलाईमा मात्रै हाम्रो देशमा करिब तीस वटा पर्व मनाइन्छ । के तपाइँसँग यी कुनै पनि जुलाई संगीत उत्सवहरूको लागि तपाइँको टिकटहरू छन्?
1 Bilbao BBK लाइभ
5 कम उत्सव
Bilbao BBK लाइभ
Bilbao BBK Live एक लामो गतिरोध पछि नवीकरण ऊर्जा र दिनहरूमा अपेक्षित पुनर्मिलनको भावनाको साथ फिर्ता जुलाई ७, ८ र ९ कोबेतामेन्डीमा। Bilbao BBK Live 2022 पोस्टरमा १०० भन्दा बढी कलाकारहरूको उपस्थिति हुनेछ; अभिषेक गरिएका ताराहरूदेखि उदाउँदो वाचाहरू, कलात्मक बहुलतालाई बलियो बनाउने, यो पर्वको विशेषता हो।
महोत्सवमा हेडलाइनर LCD ध्वनि प्रणाली हुनेछ, जे बाल्विन, हत्याराहरू, पेट शप केटाहरू, स्ट्रोमे, मध्यम, MIA र Placebo। यसमा थपिएका अन्तर्राष्ट्रिय नामहरू जस्तै केली ली ओवेन्स, WOS, रोमी वा निलुफर यान्या र राज्य दृश्यका राजदूतहरू जस्तै Zahara, Rigoberta Bandini, Alizzz, Cariño, Caribou, Venturi, Axolotes Mexicanos, LR र Depression Sonora, धेरै अन्यहरू। ।
तपाइँसँग तपाइँको किन्नको लागि अझै समय छ €155 को भाउचर महोत्सवको यो लामो-प्रतीक्षित संस्करणको लागि। र दिन टिकटहरू पनि उत्सवको प्रत्येक दिनको लागि € 60 मा उपलब्ध छन्, एक राम्रो विकल्प, निस्सन्देह, तपाइँको मनपर्ने कलाकारहरूको आनन्द लिन।
Ponferrada मा पहिलो प्रमुख स्वतन्त्र संगीत उत्सवको रूपमा एल बियर्जो नक्षत्रको वरिपरि रहेको स्टारडस्टबाट बनेको प्लानेटा साउन्ड फेस्टिभलले कोलोमन ट्राबाडो स्टेडियममा फर्किने पुष्टि गरेको छ। १५, १६ र १७ जुलाई।
को ठूलो समूह स्पेनिश संगीत आकाशगंगा जस्तै La MODA, Lori Meyers, Sidonie, Carlos Sadness, Recicled J, Dorian, Alizz वा Ladilla Rusa, अन्यहरू मध्ये, फेस्टिवलको यो नयाँ संस्करणको शीर्षकमा छन् जसको लागि टिकटहरू अझै उपलब्ध छन्।
तपाईं अब दिन टिकटहरू किन्न सक्षम हुनुहुने छैन, तर € 66 को लागि सामान्य मौसम टिकट यसले तपाईंलाई यस वर्ष २०२२ को यो महोत्सवको पोस्टरमा देखा पर्ने धेरै कलाकारहरूको आनन्द लिन अनुमति दिनेछ। तिनीहरूलाई किन्नको लागि लामो समय नपर्खनुहोस् वा तपाईं तिनीहरूबाट बाहिर जानुहुन्छ!
FIB सन् १९९५ देखि हरेक वर्ष बेनिकासिममा आयोजना हुँदै आएको छ। महामारीको कारणले भएको अवरोधपछि यो महोत्सव फेरि एकपटक आयोजना हुनेछ जुलाई 14 र 17 बीच भ्यालेन्सियन नगरपालिकामा "विभिन्न सांगीतिक संस्कृतिहरूको लागि एक अस्वस्थ जनता"।
यो वर्ष महोत्सव हुनेछ अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारहरू स्थापित र उदीयमान जसले कासाबियन, जस्टिस, टु डोर सिनेमा क्लब, मन्डो डियाओ र ब्वाईज नोइज नाथी पेलुसो, द कुक्स, बेकी हिल, उदाहरण, टाइगा, टम ग्रेनान, द हुना, टम वाकर, डेक्लान म्याकेन्ना, स्टीव जस्ता संगीत चार्टहरू विस्तार गर्दैछन्। Aoki, हराएको आवृत्ति वा जोएल कोरी।
को लागि FIB मा कोठा पनि हुनेछ स्पेनिश दृश्यका इन्डी कलाकारहरू अहिलेको सबैभन्दा सान्दर्भिक। Love of Lesbian, IZAL, Zahara, Viva Sweden, Lori Meyers, La MODA, Dorian, Miss Caffeina र La Cámara Roja जस्ता दैनिक नामहरू बाहेक, La La Love You वा Cariño जस्ता अन्य उदीयमान प्रस्तावहरू थपिनेछन्।
तपाईं अझै पनि टिकट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र जुलाईमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सङ्गीत उत्सवहरू मध्ये एकको लागि दिन टिकटहरू। आज माइमले टिकटको मूल्य परिवर्तन गर्यो; तपाईं महोत्सव वेबसाइटमा नयाँ मूल्यहरू जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
सोनिका फेस्टिभल २०२२ कान्टाब्रियन सहरमा आयोजना हुनेछ जुलाई १५ र १६ मा क्यास्ट्रो-उरडियाल्स उसले तपाईंलाई नाच्न नरोक्न सप्ताहन्तमा प्रस्ताव गर्छ। महोत्सवले यसको बिल राष्ट्रिय स्वतन्त्र ब्यान्डहरू र विभिन्न संगीत शैलीहरू जस्तै सी. टांगाना, ला मोडा, भिवा स्वीडेन, क्यारोलिना डुरान्टे वा रिगोबर्टा बन्दिनी जस्ता अन्यहरूमा प्रस्तुत गर्नेछ।
के तपाईं यस लाइभ संगीत उत्सवको आनन्द लिने व्यक्तिहरू मध्ये एक हुन चाहनुहुन्छ? जुलाई 15 र 16, 2022 मा उत्सव साइटमा पहुँच प्रदान गर्ने पासहरू हुन् €64 मा उपलब्ध छ। यदि तपाइँ एक दिनको टिकट चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ यसलाई € 39 मा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
लो फेस्टिवल बाट बेनिडर्ममा फर्किनेछ जुलाई -29-२31, २०१ सबै भन्दा राम्रो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र संगीत संग। लेभान्टे क्षेत्रमा सबैभन्दा पूर्ण उत्सवको रूपमा समेकित, यसले 30.000 m2 भन्दा बढी क्षेत्रमा समुद्र तट, सूर्य र प्रत्यक्ष संगीतको तीन दिन प्रदान गर्दछ।
यस वर्ष तपाईले बेनिडर्म लाइभ प्रदर्शनमा भन्दा बढीको मजा लिन सक्नुहुन्छ 70 रक, पप र इलेक्ट्रोनिक कलाकारहरू। मेट्रोनोमी, नाथी पेलुसो, प्रिमल स्क्रिम, इजल, अमाया, क्यारोलिना डुरान्टे, टेम्पल्स र अन्य धेरै कलाकारहरू भर्खरै नयाँ नामहरूद्वारा सामेल भएका थिए: सम्पादकहरू, डोरियन, लुईस अफम्यान, चिको ब्लान्को, डोरा, बिफन्ना र रेनिङ साउन्ड। आफ्नो प्राप्त €125 को लागि तीन दिनको टिकट वा €35 को लागि दिन टिकट मा शर्त।
के तपाई जुलाईमा कुनै चाडपर्वमा जाँदै हुनुहुन्छ? यदि तपाइँसँग अझै पनि यी जुलाई संगीत उत्सवहरूको लागि तपाइँको टिकटहरू छैनन् र तपाइँ ती मध्ये कुनैमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, तपाइँको किन्न धेरै समय नलिनुहोस्!
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » समाचार » के तपाईंसँग यी जुलाई संगीत उत्सवहरूको लागि टिकटहरू छन्?